Ukunakekela intshebe: amathiphu amahle kakhulu - Iseluleko Samadoda Anesitayela | Amadoda aSitayela
U-Alicia tomero | | Kugundiwe, Ukunakekelwa komuntu siqu
Ukuba nentshebe enkulu, eqinile futhi elungiswe kahle kungabonakala njengomsebenzi olula. Ngaphandle kwezinkinga ezengeziwe, awudingi lutho olungaphezu kokukhulisa izinwele zakho nokuthi konke kuzoxazululwa, kepha uyakwazi lokho Awukwazi ukuyigqoka isesimweni esihle uma wazi ukunakekela intshebe yakho.
Ukuvumela intshebe ukuthi ikhule ngejubane lakho kusho ukuthi ingahle iphazanyiswe futhi iqweqwe, kufanele ulawule le ntuthuko futhi unakekele ukubukeka kwayo okuhle. Ukuze wenze lokhu, kufanele ulandele uchungechunge lwezinyathelo okufanele zisetshenziswe nsuku zonke. Ngaphandle kwezinkinga ezengeziwe, lapha singakwazi imininingwane ethile lokho ngeke kukhungathekise nakancane.
1 Indlela yokutshala intshebe ngendlela efanele
2 Amathiphu okusika intshebe
3 Kufanele ngiyinakekele kanjani?
4 Ngingazilungisa kanjani izintshebe?
Indlela yokutshala intshebe ngendlela efanele
Uma ufuna izinwele ezinempilo zibukeke, kufanele udle ukudla okunempilo nokulinganisela. Ukweqiwa okuhle kwamavithamini A, B, C, E kanye ne-biotin kuhlale kubalulekile ku izinwele zikhula ziphilile futhi ziqine.
Uma kungokokuqala ukhulisa intshebe yakho, ngokuqinisekile uzozizwa ungazimisele ngokuthi uzoqala kanjani ukukwenza, mhlawumbe kuzoqala ukuba nzima futhi nokukhula okuqondile. Uma uqala uku khipha isikhumba sobuso lapho intshebe ikhula khona, Lokhu kuzokusiza ukuthi kuphume ngaphandle kobunzima. Sebenzisa amanzi ngobukhulu obudingayo, ngoba izokhipha kahle isikhumba sakho ikakhulukazi izinwele.
Ongakuthatha kubi kakhulu ukushaywa okungakukhiqiza, kepha lokho kunesixazululo noma okungenani kuthoba lowo muzwa kancane. Ungakwazi sebenzisa amafutha akhethekile ukunakekela intshebe, lo mkhiqizo usiza ukuthambisa intshebe futhi uqeda okuningi ukungakhululeki lokho. Nayi eminye imibono kucace bha ukukhulisa intshebe.
Amathiphu okusika intshebe
Sinezinombolo ezingenamkhawulo zemishini etholakala emakethe ezosisiza ukusika noma ukulinganisa intshebe ngaphandle kobunzima. Lezi zigundi zikagesi zenzelwe ukwehlisa izinga lesilevu, yilungise futhi uyibumbe ngaphandle kokuyiphuca, ukwazi ukushiya kufika ku-0,4 mm ubude.
Sebenzisa le mishini kuzosiza ukunciphisa intshebe kubude obufunayo. Zama ukomisa intshebe yakho, kuyohlala kungcono kunokwenza lapho kumanzi, ngoba kuzokunikeza umphumela omuhle kakhulu.
Ngosizo lwekama unga kama izinwele futhi usike zonke lezo ezigqame kakhulu. Zisize ngesikele ukucacisa izindawo ezithile ezifana nengxenye yamadevu. Uma uthanda ukukwenza ngezimo ezinhle kakhulu, kule ndatshana Ungathola futhi amathiphu amahle kakhulu okusika intshebe yakho ngokunembile.
Kufanele ngiyinakekele kanjani?
Uma usuvele unentshebe esikhulile futhi unesibindi sokuyinakekela kakhulu, lokhu kungaba ngamathiphu amahle kakhulu wokubonisa izinwele ezinempilo:
Geza intshebe: abaningi bayakhuthazwa ukuthi basebenzise insipho efanayo naleyo esetshenziselwe ikhanda, futhi bayazi ukuthi kungaba yiphutha elikhulu. Lolu hlobo lwensipho alunikezi imiphumela emihle ekubukekeni kwalo futhi lungacasula ngisho nokusetshenziswa kuleyo ndawo yobuso. Okwakho Kunezinsipho ezithile zokuhlanza.
Kukhona lokho susa zonke izinhlayiya ezingase zingcolise nge-massage emnene ukuze ingene kuwo wonke amakhona ayo. Kuhlelo umzuzwana wokuhlanza kufanele ukwenze ngobuciko obukhulu, ngoba kungenzeka ukuthi izinsalela zensipho zingacasula isikhumba. Qhubeka ukomisa kahle intshebe yakho ngethawula elithambile ukuze ususe wonke umswakama walo.
Sebenzisa i-conditioner: Lolu hlobo lomkhiqizo lwenzelwe shiya intshebe ethambile futhi ethambile, njengoba ilungisa i-cuticle eyonakele. Kusetshenziswa lapho intshebe yomile, kusetshenziswa ingxenye encane futhi ukuyiphulula ngeminwe ukuze ibukeke ibushelelezi futhi icwebezela. Ukusebenzisa i-conditioner kufana nokusebenzisa i-potion yemilingo, kuvimbela i-frizz, ukuxubha okucasulayo kwentshebe nokuphuka kwezinwele ngenxa yokushoda kwe-hydration.
Faka uwoyela wentshebe: lo mkhiqizo ulungile ukondla izinwele kuze kube sezingeni eliphezulu, ihambisa izintshebe kanye nesikhumba. Lokhu akuwona umsebenzi wawo kuphela njengoba sesishilo kuzonciphisa ukulunywa ngokuthambisa izinwele. Izokondla izintambo zezinwele ukuze ikhule iphilile.
Ibhalsamu: Lo mkhiqizo uzosetshenziselwa izintshebe ezinde kakhulu. Uma unecebo elingaphandle kwekhaya ungaligcoba leli bhalamu njengoba lithuthukisa ukubukeka kwakho. Kuzovela ukuthi liyajiya futhi liphinde linike izinwele nezinwele amanzi. Ukwelashwa kwayo kusiza ukulungiswa okungcono ukuze ukwazi ukufaka isitayela sentshebe yakho.
Ngingazilungisa kanjani izintshebe?
Kunezindlela eziningana zokufeza ukulungiswa kwentshebe yethu. Kunemikhiqizo kawoyela noma yebhalsamu engaminyene kakhulu ukuze ukubamba kukhanye noma kube maphakathi.
Ngakolunye uhlangothi, uma sifuna ukulungiswa okukhulu kakhulu, singasebenzisa imicu noma ama-wax. Ukusetshenziswa kwayo kulawula ukuthi izinwele zingakhululeka futhi kunemikhiqizo enikeza ukubukeka kwe-matte ukuze kubonakale sengathi awufakanga umkhiqizo.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Ukunakekela intshebe yakho: amathiphu amahle kakhulu
Ungamthola kanjani umaqondana